नेपालमा पनि सुरु भयो लकडाउन, बैसाख ९ गतेबाट DCCMC को लकडाउन गर्ने निर्णय ! - Nepali in Australia
April 21, 2021 autherLeaveaComment on नेपालमा पनि सुरु भयो लकडाउन, बैसाख ९ गतेबाट DCCMC को लकडाउन गर्ने निर्णय !
काठमाडौ । भारतीय सिमानामा रहको बाँकेको नेपालगन्जमा कोरोना संक्रमितको संख्या डरलाग्दो गरी बढ्दै गएपछि जिल्लामा लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको छ । जिल्ला कोभिड-१९ संकट ब्यवस्थापन केन्द्रको मंगलबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमितको चेन रोक्नको लागि लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिए । बाँकेमा दिनहुँ सयौंको संख्यामा कोरोना संक्रमित बढ्न थालेका छन् । मंगलवार दिउसो सम्ममा कोरोनाका कारण एकै दिन ३ जनाको निधन भइसकेको छ ।
परिक्षण गरिएका मध्य झण्डै ६० प्रतिशतमा कोरोना पुष्टि भएपछि लकडाउनको सिफारिस गरिएको हो । सीमा नाका भारतबाट आउने व्यक्तिहरु बढी मात्रामा संक्रमित छन् । स्थानिय बासीन्दाले पनि बाँकेमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै लकडाउन माग गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल मार्फत सामाजिक अगुवाहरुले लकडाउन गर्न प्रशासनलाई मेन्सन गर्दै स्टाटस लेखेका थिए ।